Tomponandraikitra… jiolahy | NewsMada
“Zandary jiolahy”. Io ny filazan’ny sekreteram-panjakana misahana ny Zandarimariam-pirenena, ny jeneraly Ravalomanana Richard, ireo zandary miray tsikombakomba amin’ny jioalahy: mampanofa basy, mamatsy bala… Tsy ekena intsony izay. Koa amin’izany, mbola hisy ihany ny zandary hogadraina rehefa manao ny tsy mety.
Tsy azo lavina, tena nisy na mety mbola misy tokoa ny mpitandro filaminana sasany poa-maso manjaka any amin’ny tanin’ny jamba hatramin’izay : manjakazaka, manararaotra… Tsy inona fa ireo mihevitra ny vahoaka ho bado sy zazabodo, tsy mahalala lalàna na tsy mahay ny tokony hataony. Ny miaro vahoaka indray no atahorana.
Saingy, hafa ny anio sy ny omaly? Na efa lasa ny zavatra taloha… Efa misy ny ezaka ataon’ny fitondram-panjakana amin’ny fanadiovana isan-tsehatra sy isan’ambaratonga, alohan’ny hanadiovana ny tanàna, ny firenena… Ampolony maro, ohatra, ny migadra ireo zandary, ireo polisy, ireo miaramila… Inona na ahoana na aiza koa ny manaraka?
Tsy ny eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena ihany tsinona no misy “zandary jiolahy”. Eo koa ireo dahalo ambony latabatra tsy voakitikitika hatramin’izay: tsimatimanota, milalao lalàna, tsy kely lalana, misy mpiaro na mifampiaro amin’ny asa ratsy… Mila hamakiana ady ihany koa ireny mba tsy handringa ny asa sy ny ezaka atao.
Eo, ohatra, ny tontolon’ny fitsarana mahabe fitarainana noho ny fisian’ny kolikoly, ny fadintseranana, ny fananan-tany, ny fitantanam-bolam-panjakana, ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, ny fiarovana sy ny fanaraha-maso ny harena an-dranomasina… Tsy ilaozan’izay fanararaotam-pahefana, ny fanjakazakana, ny fandikan-dalàna…
Aiza ho aiza izany amin’izao hoe fiovana sy fanovana izao? Mety misy hatrany any ho any ny tomponandraikitra… jiolahy. Tsy tokony hisy ho afa-bela na ho afa-maina. Ny vahoaka tsinona no voasazy amin’ny fampahantrana sy niaina tao anaty tahotra noho ny nafitsok’izy ireny izay ela izay. Mila fihatsaram-piainana amin’izay…